Isa Kodi uye wedzera-ons pane yedu Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Media nzvimbo dzaive mufashoni, uye ini ndoti vaive nekuti izvozvi nema SmartTvs uye zvimwe zvingasarudzika zvakaita semapiritsi uye zvimwe zvishandiso zvatinazvo kumba, iyo fever yemultimedia kamuri michina inoita kunge yabuda mufashoni. Nekudaro, isu hatifanire kukanganwa kuti isu tine yakavhurika sosi sosi software yeichi chinangwa uye kuti inogona kutibatsira kugadzira yedu inonakidza nzvimbo.
Takatotaura zvakawanda nezve Kodi, isoftware inoshamisa yekushandisa yedu yemultimedia centre pane chero komputa, inosanganisira yedu PC uye Raspberry Pi. Zvakare, Kodi ine akawanda anowedzera ekuwedzera ayo kugona kupfuura zvakajairwa. Zvino nekusvika kwemwaka weF1 neMotoGP, Kodi yave yakanyanya kukosha kune vazhinji vasingakwanise kubhadhara mari yeMovistar kuti vatarise mitambo iyi mu2016 kana iri munzvimbo isipo sevhisi.
Zvakanaka, sezvaunofanirwa kuziva kare, kune maAddons ekuona mitambo iyi, pamusoro pechikwata chebhora chine musoro, zvinyorwa, akateedzana, mabhaisikopo, vakuru, nezvimwe. Huya, upedze maawa nemaawa uchinakidzwa nesarudzo dzemifananidzo, vhidhiyo, ruzha uye Internet kuwana iyo Kodi inopa. Uye kana iwe uine mukana wekubatanidza michina yako ne HDMI tambo kuTV yako, iwe zvakare uchakwanisa kuzviona pane hombe skrini uye nehunhu.
Asi pane izvo isu ticha tungamira iwe kuti iwe udzidze, kana iwe usingazive, maitiro ekuisa Kodi pane yako Linux distro uye mawedzero ayo kana maAddons. Chinhu chekutanga kuisa Kodi uye kune izvi, iwe unofanirwa kuteedzera ino tutanho nhanho nhanho pane chero Linux distro (unogona kusarudza kuiisa yakananga kubva kunobva kodhi), kunyangwe isu tichizotsanangura nzira yekuzviita kubva kuDebian / Ubuntu / Zvigadzirwa zvekuparadzira (kusanganisira Raspbian yeRaspberry Pi), ayo akanyanya kuwanda:
Tinodhawunirodha Kodi package yeshanduro yazvino yakagadzika uye isa iyo:
Tinomirira kuti chirongwa ichi chipedze uye kana chapera, tichava naKi pane yedu Linux distro. Kana iwe uchida iwe unogona kupinda kuti uone kuti chirongwa chiri sei, zvakare kekutanga nguva iwe yaunogona kuzvipira iwe pachako kugadzirisa zvimwe, senge isa Kodi muchiSpanish. Kuti uite izvi, enda kuchikamu cheSystem, wobva waGadzirisa Iwindo idzva rinozovhura uye sarudza Kuoneka mukoramu yekuruboshwe. Dzvanya paInternet uyezve paMutauro. Pakupedzisira sarudza mutauro wako ...
Nhanho inotevera, pamusoro pekuzvizivisa neyakareruka uye inonzwisisika interface, ichave yekuita zvimwe zvigadziriso kana masisitimu kana iwe ukaona yakakodzera yako kesi. Asi kazhinji zvese zvakanaka kune chero mushandisi. Naizvozvo, chasara ndeche isa maAddons atinoda.
Chinhu chekutanga chekuisa kuisa maAddons kuenda kuSystem, wozoenda kuZvirevo uye wobva wadzvanya paComplements kana Addons. Iwe uchaona kuti pane yekutsvaga injini yekugona kuwana mamwe maAdvons uye woasarudza iwo kubva pane iwo runyorwa kuti uvaise. Asi kazhinji, havasi vese varipo uye wechitatu-bato maAddon anowanzo kudikanwa.
Enda kune download webhusaiti yeako addonsSemuenzaniso, kana iwe uchida kuisa Adryanlist, shandisa Google kutsvaga nzvimbo yekurodha pasi. Kazhinji Zip inotorwa pamwe nemaAddon. Haufanire kuvhura kana chinhu.
Ingoenda ku Sisitimu, Wedzera-mairi uye wozosarudza iyo sarudza Kuisa kubva kuZIP faira. Nesarudzo iyi tinogona kutsvaga madhizaidhi akadhirowewa uye anozoiswa otomatiki kana iwe ukadzvanya OK.
Kamwe yaiswa meseji ye «addons yakaitwa«, Unofanira kumirira kwechinguva, mamwe maAddon anotora nguva yakareba kupfuura vamwe ...
Iye zvino enda kumenu huru uye kune inoenderana chikamu icho maadons akaiswa, semuenzaniso, Adryanlist irondedzero yeTV chiteshi, saka tinoiwana muVhidhiyo, uye Addons. Uye iwe unogona ikozvino kuishandisa, nerondedzero yematanho ayo aanopa mune ino kesi.
Kana iwe uine chero komenda, kusahadzika kana mupiro, ichagamuchirwa kwazvo muiyi blog. Semazuva ese, isu tinofarira kuve nemhinduro nevaverengi kuti tigadzirise. Ndinoomerera, kutsoropodza kunovaka kunogamuchirwawo, dzimwe nguva kune zvishoma "zvekuita" zvataurwa kutaura zvishoma ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Isa Kodi uye wedzera-ons pane yedu Linux distro
Yakanaka kwazvo Kodi, ndinoshandisa muKaOS uye inoshanda zvakakwana
Pindura kuna DanielP
Chinyorwa ichi chinofamba zvakanaka kusvika zvoita sekunge wapererwa nenguva uye zvese zvakajairika xx, mune arch semuenzaniso kuisirwa kwayo kwakaomarara, kune shanduro dzekuvimbika dzisingashande uye unofanirwa kushandisa budiriro kana nhaka, nezvimwe, Kunyanya mune zvirimo muChirungu zvakanaka.
Ini ndakaiisa uye ndikashandisa iyo iptv asi chero munhu ane iptv server inoita shanduko nekuputa, kuti uwane mukana zvakare, saka parizvino ndinayo asi handishandise, -.-.
Iwe unoziva addons ayo anokodzera kuisa mune tax kunze kweiyo yataurwa?
Mhoro Arangoiti, iwe unofanirwa kuyedza «dhijitari mwenje purojekiti», unogona kuikanda kubva kune yayo forum, yakanyatso kukwana
Nicolas Castro akadaro
Ndinoiisa sei muKanaima?
Pindura Nicolás Castro
Dzidziso pane ma aliases eiyo Linux terminal ("dudzira mirairo"